Lesona lehibe amin'ny fonctionnaire ny nanagadrana fonctionnaire milaza fa nandray baiko fotsiny - Clément Jaona Filoha SMM - Don dresaka - TV plus du 7 avril 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Le cerveau présumé d'un rapt libéré par la chambre d'accusation Lesona lehibe amin’ny fonctionnaire ny nanagadrana fonctionnaire milaza fa nandray baiko fotsiny...
Lesona lehibe amin’ny fonctionnaire ny nanagadrana fonctionnaire milaza fa nandray baiko fotsiny – Clément Jaona Filoha SMM – Don dresaka – TV plus du 7 avril 2019
Clément Jaona – Magistrat – Président du syndicat des magistrats de Madagascar
Lesona lehibe ho any fonctionnaire, indrindra ny fonctionnaire madinidinika ety ambany. Satria zareo milaza hoe nanatanteraka baiko, mizara roa ny baiko tanterahinay, raha ohatra ka baiko tsy ara-dalana na hoe ordre manifestement illégal dia ny mpanatanteraka baiko ihany no iharan’izay sazy izay. Sanatria ny vava hoe : vonoy io olo io, ianao izao mahafantatra fa ny famonoana olo tsy azo atao, ordre manifestement illégal. Dia fanaraka ny ordre légal, raha ohatra indray hitanao fa ara-dalana sy araka ny note de service rehetra rehetra ny baiko nomena anao ka tsy manatenteraka amin’izay ianao, mifototra aminao tsy manatanteraka indray izy. Ka ho an’ny fonctionnaire izay mpila ranondranony te ho tsara tarehy eo anatrehan’ny lehibeny manombok’izao izany tokony hitandrina amin’izay, ary handa mihitsy ary rehefa ohatra ka tsy mety ilay baiko. Satria ho andry zareo mpiasan’ny domaine no tena problème izao hitako amin’izy ireo, saika abus de fontion no notorian’olona an’izy ireo. Inona moa no fisehon’ny abus de fonction, misy olona mangataka tany, kely tsy ho 10 taona, 25 taona tsy mety azo ilay tany. Avy ato afara misy olona iray mangataka, tsy ampy roa volana dia azo ilay tany. Amin’izay fotoana izay, ilay mpiasan’ny domaine torian’olona pour abus de fonction. Ilay olona nahazo titre pour corruption active, tonga dia miara-dobo ireny olo ireny. Ary ny fandehan’izy io raha isika no mahita, fivarotana tanim-panjakana izao no tena problème. Fivarotana tanim-panjakana zaridaina, izany espace vert izany domaine public, tsy azo amidy, inalienable. Tsy azo ekena mihitsy izany hoe olona ambony na inspecteur de domaine, tsy ahafantatra hoe manahoana moa ny fomba hivarotana domaine public. Ohatrany cas villa Elisabeth, mandeha koa izy io, même date amin’ny villa Elisabeth, satria tao ny asako taloha, tamin’ny poste. Io garage-ny poste amin’izao fotoana izao sy i Artec Omert taloha, même date samy 24 Janvier 2014 no nivarotana an’ireo. Tsy azo ekena mihitsy, ny fieritreretako azy, ny inspecteur de domaine tsy ahafantatra hoe misy acte de désaffectation ve? arrêté de désaffectation, izany hoe nialan’ny fanjakana tanteraka ve io faritra satria ity izany ni-affecter-na aloha, nisy arrêté ni-affecter azy ho an’ny ministera anankiray. Dia avy eo tsy mintsy misy acte de désaffectation arrêté koa ny manala an’ilay fahefana ao amin’ilay tany. Raha ohatra tsisy an’izay dia lasa mety ho cisconstance aggravante io ho an’ilay olona. Manaonao foana izany, hoe raha ohatra ka manatanteraka baiko. Tamin’ny alarobia aho nahita na ny problèmen-dRavalomanana teny amin’ny Express. Ahoana moa ny olona nanao an’ireny tereny titré-borné amin’ny olona, tsy par décision de justice ny nanaovana azy, na hoe ex-pro-pression pour cause d’utilité public nefa tonga dia omena olona fotsiny izay. Izany ve dia mbola ho tolerer-na ny zavatra ohatran’izany, fa grave loatra raha ohatran’izany. Manaraka izay dia izao an, mikasika an’io fitakiana sendikaly io, dia izao manko ny problème antsika eto, izay olona mpitaky zavatra eto Madagasikara tsy mba heverina ho citoyen, olom-pirenena fa rebelle.
Article précédentRANDRIANASOLO Jacques affirme qu’il y a un relent de corruption sur la libération par les magistrats du présumé cerveau des kidnappings TV PLUS 3 avril 2019
Article suivantJacques RANDRIANASOLO manome baiko ny fitsarana hitandrina tamin’ny raharaha Kidnapping – DON DRESAKA DU 07 AVRIL 2019 BY TV PLUS MADAGASCAR
L’action civile de la société est la seule recevable en abus...
Ady amin’ny kolikoly – Miainga amin’ny fanabeazana ny olom-pirenena hoy SEM...